Efesiana 2: 1-22
Efesiana 1 Efesiana 2 Efesiana 3
Ary hianareo dia efa novelominy, fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo,
Fa Andriamanitra, Izay manankarena amin'ny famindrampo, noho ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika,
na dia fony mbola matin'ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antiska niaraka tamin'i Kristy (fahasoavana no namonjena anareo);
Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy.
Koa tsarovy fa fahiny hianareo izay jentilisa araka ny nofo, ka nolazain'ny voaforan-tànana teo amin'ny nofo hoe 'tsy voafora', -
eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana an'i Kristy hianareo, fa olon-ko azy tamin'ny fanjakan'ny Isiraely ary vahiny tamin'ireo faneken'ny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamamnitra teo amin'izao tontolo izao;
fa ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy hianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakeken'ny ran'i Kristy.
fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana, dia ny lalàna misy didy natao hotandremana, mba hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovany fihavanana,
Ary tonga Izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana [fiadanana] taminareo izay lavitra ary fihavanana [fiadanana] tamin'izay akaiky koa.
Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony hianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra,
ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny Tompo.
Ary ao aminy no miaraka aorina koa hianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy.